Dhamaanteen Waan Necebnahay Jaajuusnimada iyo Wicitaan-qabow ... Ilaa aynaan Naqaan | Martech Zone
Dhamaanteen Waan Necebnahay Been Abuurka iyo Wicitaanka Qabow… Ilaa Aynaan Naqaan
Khamiis, Juun 15, 2017 Jimco, Juun 16, 2017 Douglas Karr
Bishii Meey 15-keedii, waxaan ka helay emayl aan la weydiisan karin (aka SPAM) oo ka socda hay'ad ku taal Atlanta oo ii sheegaysa waxa uu yahay fiidiyoow sharrax leh. Waan ogaa waxa ay ahayd, waan haynaa laga qoray fiidiyowyada sharxa si baaxad leh oo aan u daabacnay in yar oo inaga mid ah. Kama jawaabin e-maylka. Toddobaad ka dib, waxaan helayaa emayl kale oo wata qoraal la mid ah. Toddobaad ka dib, mid kale. Midkoodna uma jawaabo. Afar emayl oo aanan ka jawaabin ama xitaa gujinin xiriiriye.
Waxaan bilawnay inaan lashaqeyno macmiil cusub waxaanan adkeynay shuruudahooda astaamaynta ee ah dammaanad qaadka aan dib u naqshadaynayno Mid ka mid ah mashaariicda mustaqbalka ee aan ognahay inaan wax ka qaban doonno waa fiidiyow sharraxa iyaga. Marka, sidaan uga jawaabayo xoogaa jawaab celin ah oo ku saabsan dammaanadda cusub ee aan qorsheynay, waxaan wali ka helayaa emayl kale shirkadda sharraxayaasha fiidiyowga.
Ma jirin xiriirro ka-saaris cinwaan ah e-maylka, midkoodnana ma jirin waxaa suuro galiyay astaamaha… laakiin waan hubaa inuu adeegsanayay qalab otomaatiga iibka ah. Wakiilka iibka wuxuu geliyay xiriiriyeyaal shaqadooda ugu dambeysay emailka wuxuuna yiri waxaan jeclaan lahaa inay bixiyaan qiimo dhimis si aan ugala shaqeeyo mashruuca koowaad. Waxaan farta ku fiiqaa iskuxirka tusaalaha dhowr ilbiriqsi oo aan isweydiiyo inay fiicnaan laheyd iyo inkale… waana riixay.
Ujeeddada aan gujiyay waxay ahayd fiidiyow sharraxaya 1-daqiiqo ee cajiibka ah. Waxay ahayd mid si buuxda loo soo agaasimay, waxay lahayd dhawaaj aad u wanaagsan, iyo xitaa saamaynta dhawaaqa oo isku dhafan. Xawaaraha uu ku socday lama degdegin oo waxay ahayd tayo gaar ah. Tani waxay noqon kartaa heshiis aanan ahayn inaan dhaafo sidaa darteed waxaan kujawaabay macluumaadkeyga cusub ee mashruuca oo waxaan dhagsiiyey dir.
Daqiiqad gudahood, taleefankaygu waa garaacay waana ninka ii soo diray toddobaad kasta fariin aan la weydiisan karin. Wuu wacay si uu u helo faahfaahin dheeraad ah wuuna ku faraxsanaa inuu arko haddii ay caawin karaan iyo in kale. Ma uusan riixin, iskuma uu dayin inuu i xiro, wuxuuna in muddo ah ku qaatay barashada ganacsigayga iyo awoodeena. Waxaan ku dhameynay wadahadalki asagoo balanqaaday inaan lasocon doono xigashada subaxdii.
Waan necbahay… Laakiin way shaqaysaa!
Waan hubaa inaan si toos ah karbaash loogu garaacayo internetka si aan u noqdo suuqgeynta emaylka ee si guud u qiraya:
Ka jawaab celinta SPAM
Dhab ahaantii samaynaya wax aan la qiyaasi karin iyo gujinaya xiriiriye emaylka SPAM.
Waayahay, waad i heshay Laakiin waad ogtahay waxa? Hay'adani waxaa laga yaabaa inay hadda heshay macmiil cusub oo iyaga ka siin doona shaqo ka socota goobtaan. Aniguna waxaa laga yaabaa inaan soo degay lamaane aan caadi aheyn oo kor u qaadi kara animation-ka anaga qiimo aad u macquul ah. Haddii aan isku dayo inaan sameeyo fiidiyowyo sharraxaad yar ah iyaga, abaalmarinta ayaa aad uga badan halista labada shirkadood.
Dhamaanteen waan qaylinaa oo waan ka qaylinaa SPAM iyo wicitaano qabow… laakiin runtii waxaan u baahanahay inaan daacad ka ahaano waxtarkooda. Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay wax soo saarka, meelaynta, iyo qiimaha. Xaaladdan oo kale, badeecaddu waa wixii aan u baahday, meelayntu si sax ah ayaa loo qabtay, sicirkuna wuu saxnaa.
Tani macnaheedu maahan inaan ku dhiirigalinayo macaamiishayda inay bilaabaan BADBAADINTA wax yaabaha dadka ka imanaya… laakiin gabi ahaanba waan aqoonsanahay sababta ay ganacsatadu u sameeyaan.
Tags: emailwicitaanada iibkaemaylka iibkaspamaan la weydiisanwicitaanada iibsi aan la weydiisanemaylka iibka ee aan loo baahnayn
Sidee Julius u Kordhinayaa ROI ee Suuqgeynta Saameynta
Jun 16, 2017 saacadu markay ahayd 11:11 AM
Waan kuugu raacsanahay. Furaha halkan ayaa ah in cilmi baaristu ay muhiim tahay. Waa inaan ku dadaalno sameynta cilmi baaristaas isla markaana aan fahamno iibsadeyaasha iman kara. Waxaan u maleynayaa marar badan inaan helno wax yar oo murugo ah maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan la kulanay calaamadeyn SPAM oo aan helno wax yar oo kiciya oo ku faraxsan inaan u calaamadinno kuwa kale sida SPAM. Noocan oo kale ah wuxuu dhaawici karaa ganacsiyada; muddo dheer. Waxaan ka helay emayl qabow xalay qof isku dayaya inuu iiga iibiyo adeegyada nuxurka leh, waxaan markii hore u calaamadeynayay inay yihiin spam, laakiin nafteyda ma sameyn karin inaan sameeyo. Ma uusan lahayn xiriir aan la soo bixin, sidoo kale. Si fudud ayaan u tilmaamay taas oo waxaan idhi, "maya, mahadsanid." Waxaan u maleynayaa inaan u baahannahay inaan aqoonsanno farqiga u dhexeeya spam-phishy. Kuwa dhaha, "qaado kaabadan cusub," ama "ka samee $ 1,000 maalintii, guriga"; Kuwani si cad ayey u yihiin spam, ma jiro bartilmaameed. Waxaan u maleynayaa haddii iibiye uu sameeyay cilmi baaris ku filan si uu u ogaado inaad ku jirto suuqgeynta oo uu kuu soo diro emayl ku siinaya adeeg suuqgeyn ah, taasi waa caadi. Kaliya noqo mid daacad ah oo dhaha, "maya, mahadsanid" taasna way qaban doontaa. Emailku tagi maayo, ama wicitaan qabow.